छोरा वा छोरी जन्माउने चाइनिज विधि ! – दैनिक नेपाल न्युज
कुन महिनामा श्रीमतिले गभर्धरण गरको हो ? अनि यो चार्ट हर्नोर्स ठ्याक्कै मिल्ने छ । छारा नै छोरा र छोरी नै छोरीले भरिएका कैयौं परिवारले यो प्रविधि अपनाएर यतिखेर हाँसीखुशीका साथ जीबन बिताइरहेका छन् । तपाई पनि यो प्रविधि अपनाउनोस्, सुखी र खुशीका साथ जिउनोस् ।
यदि तपाईंलाई पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको सन्तान जन्माउने मन छ भने एकचोटी यो चार्टको प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् । चार्टमा माथिल्लो पंक्तिमा स्वास्नी मान्छे को उमेर दिईएको छ र अर्को तर्फ जुन महिनामा गर्भधारण भएको छ त्यो महिना देखाइएको छ । ” X ” को प्रयोग छोराको लागि र ” O ” को प्रयोग छोरीको लागि गरिएको छ । चार्टको माथिल्लो तेर्सो हरफमा महिलाको उमेर दिएको छ ।
बायाँतर्फको ठाडो हरफमा महिना दिएको छ । उदाहरणको लागि तपाईको श्रीमति १८ वर्षको छ भने पुस महिनामा गर्भ रहेमा छोरी, माघमा गर्भ रहेमा छोरा, फागुनमा रहेमा छोरी र चैत्रदेखि मंसिर महिना सम्ममा गर्भ रहेमा छोरा हुनेछ । त्यस्तै तपाईको श्रीमति २२ वर्षको छ भने पुस महिनामा गर्भ रहेमा छोरी, माघ र फागुन महिनामा गर्भ रहेमा छोरा, चैत्रमा गर्भ रहेमा छोरी, बैशाखमा रहेमा छोरा हुनेछ ।